Brontophobia: waa maxay, waa maxay astaamaheeda iyo sida loo daaweeyo | Saadaasha Shabakadda
Oo aan waligiis ka baqin duufaan, danab ama dhawaaqa onkod. Waa wax caadi ah in wax lagu dhufto marka ay danabku ku soo dhowaadaan ama marka onkodku aad u dhawaaqo guriga oo dhan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira cabsi aad u badan oo carruurnimada ku saabsan hillaac iyo onkod Waxaa loo yaqaanaa brontophobia. Ma aha wax kale oo aan ka ahayn cabsida danab iyo onkod ee qofku qabo ilaa yaraantiisii ​​iyo in haddii la daaweeyo waqtigeeda, uusan xidid ku noqonaynin qaan-gaadhnimada.
Qormadan, waxaan si faahfaahsan kuugu sheegaynaa waxa brontophobia tahay, astaamaha ay leedahay iyo waxa looga qaban karo si sax ah loogu daaweeyo.
1 Waa maxay brontophobia
2 Ciladaha welwelka
3 Calaamadaha brontophobia
3.1 Calaamadaha jirka
3.2 Calaamadaha garashada
3.3 Calaamadaha dhaqanka
4 Sida loo daaweeyo brontophobia
Waa maxay brontophobia
Ciladan waa walaac waxayna la xiriirtaa cabsida cuqdada ee duufaannada. Hillaaca iyo onkodku sidoo kale waxay qofka siiyaan cabsi. Tusaale ahaan, sawaxanka fudud ee onkodka, qofka qaba brontophobia wuxuu bilaabi karaa inuu la gariiro cabsi, dareemo xun, dareemo culeys, iyo guud ahaan inuu xumaado. Waxay ku saabsan tahay a aad loo buunbuuniyey, aan macquul ahayn oo aan la xakamayn karin taasi waxay isu bedeshaa jawaab walaac ah markasta oo qofku la kulmo wakiiladan dabiiciga ah.
Iyada oo ay sabab u tahay jawaabta walwalka, soo noqnoqoshada waxqabadyada, ficilada iyo dabeecadaha kala duwan ayaa u muuqda in ay asal ahaan soo baxaan kuwaas oo la doonayo in looga hortago xaaladdan oo qofka ku abuureysa cabsi. Qofkani wuxuu rabaa inuu sida ugu dhaqsaha badan uga cararo xaalada isaga qasaysa.
Caadi ahaan Brontophobia badanaa waxay bilaabataa inay soo muuqato da 'hore. Carruurtu inay ka baqaan duufaannada waa gebi ahaanba dabiici. Si kastaba ha noqotee, haddii cabsidan ay sii xoogeysato oo ay sii weynaato waqti ka dib, waxay isu beddeli kartaa cuqdad run ah. Haddii dabeyluhu ku badan yihiin aagga uu ku nool yahay qofka qaba brontophobia, cuqdadani waxay si weyn u faragelin kartaa horumarka nolosha qofkaas. Ka soo qaad in qofka oo ka baqaya duufaanno uu ku sugan yahay aag ay ku jiraan 1 ama 2 duufaan bishiiba. Wuxuu had iyo jeer la kulmi doonaa cabsi aan loo baahnayn xaqiiqda fudud ee ah inaanan si wanaagsan loola dhaqmin laga soo bilaabo da 'yar.
Waxaa jira daaweyn cilmi nafsi oo wax ku ool ah oo loogu talagalay dadka qaba cuqdadan.
Si aad u ogaato inaad qabto brontophobia, khalkhalka walwalka waa astaamo wanaagsan oo la iska fiiriyo. Calaamadaha tooska ah ama cawaaqibka brontophobia ayaa ah in la arko in qofka uu ku dhaco uu had iyo jeer isku dayo inuu ka fogaado ama ka cararo xaaladaha joogtada ah ee ay ka baqayaan. Tusaale ahaan, adigoo si fudud u arka daruuro madow, isku day inaad u gudubto dhinac kale oo aysan jirin. Kaliya inaad ka fikirto inay duufaan dhici doonto waxay ka dhigeysaa mid aad u argagax badan, xanaaqsan oo cabsi leh.
Kuwani waa astaamaha ugu muhiimsan ee qofka qaba brontophobia:
Qofkani wuu yeelan doonaa cabsi xad dhaaf ah oo aan u qalmin xaalada mid ka mid ah.
Cabsida aad qabtaa badanaa caqligal badan ma lahan. Waa wax aan caqli gal ahayn ama salka ku haya fikrado khaldan. Fikradaha ay ka mid yihiin danabku waxay ku soo dhici karaan guriga gudihiisa, in sanqadha onkodku ay jabi karto daaqadaha, iwm.
Yaa ku xanuunsanaya cabsidan ma xakamayn karo, xitaa haddii aad haysato qof ku garab taagan oo ku taageera oo kuu sheega in wax xun kugu dhici doonin.
Caadi ahaan, qofka qaba brontophobia wuxuu si ba'an isku dayaa inuu ka cararo xaaladaha uu ku yeelan doono cabsida aan caqliga lahayn.
Haddii qofkani uusan qaadan daaweyn laga baqo, waxay noqon kartaa mid joogto ah oo keenta cawaaqib xumo.
Midka ugu horreeya uguna caansan waa cilladda walaaca ee aan kor ku soo xusnay. Tan macnaheedu maaha in dadka oo dhami ay u muujin doonaan cuqdada si isku mid ah. Qof kastaa wuxuu leeyahay qaabkiisa uu u muujiyo naftiisa waxaana u arki karnaa, qaab guud, waa maxay astaamaha ugu waaweyn:
Cabsida iyo welwelka la soo maray badanaa waxay bixiyaan is-beddelo iyo isbeddello isdaba-joog ah oo ku dhaca noolaha. Waxaan la kulanay:
Garaaca wadnaha oo kordha
Neefsashada weyn halbeegga waqtiga.
Qofku wuxuu dareemaa neef yar.
Miyir beelidda xaaladaha ugu xun.
Brontophobia ma lahan oo kaliya astaamahan muuqaalka ah halkaasoo aan uga mahadcelin karno dibedda dhibaatada qofka marka aan aragno inay jirto ama duufaan soo socota Waxa kale oo jira astaamo garasho. Tusaale ahaan, Qofka ay dhibaatadu saameysey wuxuu yeelan karaa fikrado aan la xakamayn karin iyo dareen yar oo ku saabsan khatarta dhabta ah ee ka dhalan karta duufaanta. Cawaaqib xumada ka dhalan karta saadaasha hawadda waxaa lagu qiyaasaa hab masiibo ah. Rumayso ama ha rumaysan, wuxuu kaloo ka baqayaa inuu naftiisa lumiyo naftiisa oo uusan garanaynin inuu caqliga u dhaqmo. Sababtaas awgeed, waxaad had iyo jeer dooneysaa inaad ka fogaato xaaladaha ay kugu soo wajahan yihiin duufaanta.
Labadan astaamood ee hore waxay horseedaan dabeecad si cad uga duwan dadka kale. Waxa ugu badan ee la muujinayaa waa in laga baxsado xaalad la sheegay oo laga baqay ama la cararo markii kicintu durba muuqato. Dhinaca kale, haddii qofku uusan ka carari karin duufaanka, wuxuu isku dayi doonaa inuu sameeyo nooc kasta oo waxyaabo ah si uusan uga fikirin ama isku dayin inuu iloobo inay ku jiraan duufaan
Sida loo daaweeyo brontophobia
Brontophobia waxay noqon kartaa cudur lumis ah, gaar ahaan haddii qofka u xanuunsadaa uu had iyo jeer la kulmo duufaannadaas sababo la xiriira cimilo u roon. Daaweynta garashada iyo habdhaqanka waxay ku guuleysataa natiijooyin cajiib ah daaweynta cuqdadeedka.
Markaad bilowdo daaweyn, waxaad isku dayeysaa inaad fuliso farsamooyin taxane ah oo ujeedadu tahay baabi'inta 3da astaamood ee aan horay u aragnay. Iyadoo loo marayo dib-u-habeyn garasho, caqiido aan caqli-gal ahayn oo ku saabsan duufaannada ayaa wax laga beddeli karaa si qofku u yareyn karo calaamadaha intiisa kale. Haddii qofku ogaado in duufaanku aanu khatar ku ahayn meesha noocan oo kale ah, wuu xasilloonaan karaa. Sayniska wax badan buu ka caawiyaa tan.
Dhinaca kale, wararka xun ee ku saabsan hillaaca ku dhaca dadka waxay xitaa cabsi badan ku qabaan dadka. Inta lagu jiro daweynta, waa inaad taqaanaa sida loo sharxo laakiin aan lagaa dhaafin ama aadan ka been sheegin.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto brontophobia.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Brontophobia